Zoma, Jona 10, 2022 Zoma, Jona 10, 2022 Ed Breault
Raha mikasika ny fitehirizana sy fandaminana votoaty dia misy vahaolana maromaro any — eritrereto ny rafitra fitantanana votoaty (CMS) na serivisy fampiantranoana rakitra (toy ny Dropbox). Ny Digital Asset Management (DAM) dia miara-miasa amin'ireo karazana vahaolana ireo—saingy mila fomba hafa amin'ny atiny. Safidy toy ny Box, Dropbox, Google Drive, Sharepoint, sns.., amin'ny ankapobeny dia toy ny toeram-piantsonana tsotra ho an'ny fananan'ny fanjakana farany; tsy manohana ny dingana ambony rehetra amin'ny famoronana, famerenana ary fitantanana ireo fananana ireo izy ireo. Raha resaka DAM
Nahoana ny Audio Out-Of-Home (AOOH) no afaka manampy amin'ny fitarihana ny Tetezamita hiala amin'ny Cookies avy amin'ny antoko fahatelo
Talata, Martsa 8, 2022 Talata, Martsa 8, 2022 Paul Brenner
Efa ela no fantatray fa tsy hijanona ho feno ela kokoa ny siny cookie an'ny antoko fahatelo. Ireo kaody kely miaina ao amin'ny mpitety tranonkalantsika ireo dia manana hery hitondrana fampahalalana manokana an-taonina. Izy ireo dia ahafahan'ny mpivarotra manara-maso ny fihetsiky ny olona amin'ny Internet ary mahazo fahatakarana tsara kokoa momba ny mpanjifa ankehitriny sy ny mety ho mpanjifa mitsidika tranokala marika. Manampy ireo mpivarotra ihany koa izy ireo - sy ny mpampiasa aterineto antonony - amin'ny fomba mahomby sy mahomby kokoa amin'ny fitantanana media. Inona àry no olana? ny
Nisy podcast vitsivitsy izay naniry mafy aho niresaka tamin'ilay vahiny mialoha mba hahazoana antoka fa mahasarika sy mampiala voly izy ireo. Mitaky asa kely ny manomana, manomana, manoratra, manitsy, mamoaka ary mampiroborobo ny podcast tsirairay. Izany matetika no mahatonga ahy ho any aoriana irery. Martech Zone no fananako voalohany izay tazomiko, fa Martech Zone Ny dinidinika dia manampy ahy hiasa hatrany amin'ny fahaizako miteny ampahibemaso,
Alakamisy, May 6, 2021 Talata, May 11, 2021 Lindsay Tjepkema
Noforonina avy amin'ny hevitra fa ny resaka dia tokony ho ny làlan'ny atiny marketing rehetra, Casted no hany sehatra marketing votoaty natsangana hanomezana alalana ireo mpivarotra hiditra, hanamafisana ary hanomezana ny atiny podcast marika hamelomana ny paikadim-barotra momba ny votoatiny manontolo. Tsy toy ny vahaolana marketing amin'ny atiny hafa, izay namboarina hanampiana ireo mpivarotra hamoaka atiny voasoratra bebe kokoa, Casted dia ahafahan'ny mpivarotra mandaitra sy mandaitra kokoa amin'ny alàlan'ny fomba voalohany. Miaraka amin'ny Casted